Huawei P20 ၏ပုံရိပ်သစ်ကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းသောဒီဇိုင်းဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသထားသည် Androidsis
Huawei P20 ၏ပုံရိပ်သစ်ကိုအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသထားသည်
လူးဝစ်လိုပက်ဇ် | | Huawei
ကျွန်တော်သင်သိရ Huawei သည် P20 အသစ်ကို Mobile World Congress ၂၀၁၈ တွင်မစတင်တော့ပါဘာစီလိုနာတွင်ယခုဖြစ်ပျက်နေသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုမဟုတ်ဘဲမတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင်ပြင်သစ်နိုင်ငံ၊ ပဲရစ်မြို့တွင်ကုမ္ပဏီက၎င်း၏ထုတ်ကုန်များကိုသီးခြားအဖြစ်အပျက်တစ်ခုတွင်ပြသမည်ဖြစ်သည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ယိုစိမ့်မှုလုံးဝမရပ်တန့်နိုင်ဘဲ Huawei P20 သည်အလင်းကိုအချိန်မတိုင်မီထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည် သတ္တုဘောင်နှင့်ဖန်ခွက်ကိုယ်ထည်နှင့်အတူလှပသောဒီဇိုင်း။
Huawei P20 အချက်အလက်များကိုယိုစိမ့်မှုအသစ်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်
ဒီနေ့ထွက်ပေါ်လာတဲ့ဓာတ်ပုံက 18:9အချိုးအစားနဲ့မျက်နှာပြင်အပြည့်ရှိမယ်လို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ယခင်ယိုစိမ့်မှုမှာငါတို့လေ့လာတွေ့ရှိနိုင်ပါတယ် P20 သည် iPhone X နှင့်ဆင်တူသည် မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒီပုံကဒီအင်္ဂါရပ်ကိုမြင်ခွင့်မပြုဘူး။
အနောက်ဘက်တွင်ကင်မရာသုံးလုံးနှင့် LED Flash တပ်ဆင်ထားသည်။ မှန်ဘီလူး၏တည်နေရာသည်ယခင်က filtered photos များနှင့်လုံး ၀ ပြောင်းလဲသွားပြီဖြစ်သည်။ ယခုကင်မရာများသည်အလျားလိုက်လိုက်ဖက်ပြီးဒေါင်လိုက်မဟုတ်ပါ။
ရက်သတ္တပတ်များအစောပိုင်းကပေါက်ကြားခဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုတစ် ဦး ပြသခဲ့သည် 12 အမတ် + 16 အမတ် + 16 အမတ်ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံf/ 1.8 ၏စမတ်အာရုံနှင့် aperture နှင့်အတူ။ ရှေ့ဖက်တွင်f/ 8 ၏ aperture ပါ ၀ င်သည့် 2.0 megapixel ကင်မရာတစ်ခုရှိသည်။
အတည်မပြုနိုင်သောအရာမရှိသော်လည်း Huawei P20 သည် ၀ ယ်နိုင်သည်ဟုဆိုသည် HiSilicon Kirin 970 ပရိုဆက်ဆာနှင့် ၃,၃၂၀ mAh ဘက်ထရီ.
P20 နှင့်အတူ Huawei သည်ဗားရှင်းနှစ်ခုပါသော 'PRO' ဗားရှင်းကိုထုတ်လုပ်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည် 6GB RAM နှင့် 128GB သိုလှောင်မှုပမာဏနှင့် 8GB RAM နှင့်အတူ 256GB သိုလှောင်မှု။ လွန်ခဲ့သောအပတ်အနည်းငယ်ကသူတို့ပေါက်ကြားခဲ့သည် ဖြစ်နိုင်သည့် Huawei P20 Pro သူတို့ကတစ် ဦး နှင့်အတူထား၏ Kirin 970 ပရိုဆက်ဆာနှင့် ၄၀၀၀ mAh ဘက်ထရီ.
နောက်ဆုံးအနေနှင့်အွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခု၏ကိန်းဂဏန်းစာရင်း၏ယိုစိမ့်မှုသည် Huawei P20 Pro ကိုကနှင့်ပြသည် ၅၈၉၉ ယွမ်၊ ယူရို ၇၅၀ ခန့်ဒါကြောင့် P20 ကိုယူရို ၆၀၀ ၀ န်းကျင်ရှိမယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Huawei » Huawei P20 ၏ပုံရိပ်သစ်ကိုအံ့သြဖွယ်ဒီဇိုင်းဖြင့်ထုတ်ဖော်ပြသထားသည်
Galaxy S9 နှင့် S9 + သည် microSD ကဒ်များကို 400GB အထိထောက်ပံ့သည်
ZTE Temp Go - Android Go ပါ ၀ င်သောစမတ်ဖုန်းသစ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များ